Apple ayaa xukuntay iibinta kirismaska ​​iyada oo la adeegsanayo 49% Wararka IPhone
Apple waxay ku badan tahay iibinta kirismaska ​​iyada oo la adeegsanayo 49%
Sannad kale, ragga ku saleysan Cupertino ayaa mar kale xukumay iibinta qalabka sidaas darteedna tirada firfircoonida inta lagu jiro xilligii dukaamaysiga ugu weynaa ee Kirismaska. Shirkado badan oo tiknoolajiyad ah ayaa rajadooda ku dhajiya xilligan inay awoodaan inay bixiyaan tirooyin wanaagsan kahor dhamaadka sanadka. In muddo ah hadda, aaladaha teknolojiyadda, haddii ay yihiin taleefannada casriga ah, kiniiniyada, qalabka wax lagu iibiyo ... waa kuwa ugu qiimaha badan dadka isticmaala marka ay timaado sameynta hadiyad inta lagu jiro xilligan dukaamaysiga khasabka ah.
Shirkadda Flurry Insights ayaa dhowaan soo saartay daraasad aan ku arki karno sida Apple ayaa mar kale horseeday iibinta iyo kicinta aaladaha Maraykanka iyo Kanada, oo leh 49,1% hawlgallo, laba dhibcood kayar isla muddadaa sanadkii la soo dhaafay, taas oo ay ku gaadhay 51,3% ka mid ah. Dhiniciisa, shirkadda Kuuriya ee Samsung, ayaa kor u kacday 19,8% firfircoonaan, laba dhibcood ka badan tii sanadkii hore, taas oo ay ku hartay 17,7% ee wadarta firfircoonaanta xilligan kirismaska. Waxay u muuqataa in labada qodob ee Apple lumisay ay Samsung soo ceshatay.
Aad ayuu uga hooseeyaa qiimeynta, waxaan helnaa Nokia, oo leh 2%, LG oo leh 1,7% iyo Xiaomi oo leh 1,5%. Waa wax lala yaabo in aan laga helin kala-saaristaas shirkadda Japan ee Sony, oo sannadihii la soo dhaafay si aad ah ugu sharadaynaysay suuqa Mareykanka, iyadoo soo bandhigaysa aalado aad loo aqbali karo oo qiimahoodu caddaalad yahay.
Sannadkan wuxuu ahaa kacaankii xarafyada, taas oo sidaan marar badan soo sheegnay, ay cunayaan suuqa kiniinnada yaryar sida iPad Mini. Iibinta kiniiniga, guud ahaan, waxay ka hooseysaa labo dhibcood sanadkii hore, halka suuqyada loo yaqaan 'phablet market' uu laba jibaarmay, isagoo ka kacay 13% sanadkii hore una gaarey 27% sanadkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Apple waxay ku badan tahay iibinta kirismaska ​​iyada oo la adeegsanayo 49%
Taylor Swift's 1989 World Tour Hada Waa La Heli Karaa, Kaliya On Apple Music
Dagaalkii 5aad ee Casriga: Madoobaadka, FPS waxay timid Apple TV